वाट्सएपमा नग्न फोटो भाइरल भएपछि मिस जिम्बाब्वेको ताज खोसियो | Jukson
वाट्सएपमा न्युड फोटोहरु भाइरल भएपछि मिस जिम्बाब्वेको ताज खोसिएको छ । ताज खोसिएपछि उनले यस वर्ष चीनमा हुने मिस वल्र्ड प्रतियोगितामा सहभागि हुन नपाउने भएकी छिन् ।
२५ वर्षीय एमिली काचोटेले यस घटनापछि अब आफु आराम गर्ने सोचमा रहेको बताएकी छिन् । गत अप्रिलमा मिस जिम्बाब्वे चुनिएकी एमिलीले केही समय आराम गरेपछि आफू मोडलिङमै टिकिरहने बताएकी छिन् ।
जिम्बाब्वेमा एकै वर्षमा यस्तो आरोपमा वर्षमा कुनै प्रतियोगिताबाट हटाइएकी उनी दोस्रो मोडल हुन् । यस अघि मिस जिम्बाब्वे थबिसो फिरीको पनि न्युड फोटोहरु सार्वजनिक भएपछि ताज फिर्ता लिइएको थियो ।
किन गरियो क्राउन फिर्ता ?
मिस जिम्बाब्वे ट्रस्टले एमिलीको ताज फिर्ता गर्नुको कारण खुलाउँदै भनेको छ, ‘एमिलीले सम्झौता अनुसारका नियम उल्लंघन गरेकी छिन् । जसले गर्दा उनको ताज फिर्ता लिन ट्रस्ट बाध्य बनेको हो ।’ सम्झौतामा सहभागीले कहिल्यै न्युड फोटो सुट नगरेको र टाइटल जितेपछि पनि यस्तो नगर्ने सर्त राखिएको हुन्छ । उक्त नियम उल्लंघन गरेपपछि उनको ताज खोसिएको हो ।
कसरी भयो न्यूड फोटो भाइरल ?
मिस जिम्बाब्वेको ताज खोसिएपछि न्यूड फोटो भाइरल भएको विषयमा एमिलीले आफ्नो बचाउ गर्दै यस्तो फोटो प्रतियोगितामा भाग लिनु पहिले नै खिचिएको बताएकी छिन् । सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार उनको यो फोटो उनका पूर्व प्रेमिले सार्वजनिक गरिदिएका हुन् । एमिलीले भनेकी छिन्, ‘हामीले त्यस रात केही ड्रिंक्स गरेका थियौँ, त्यो रात जे पनि भयो त्यो मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा थियो, तर अहिले उक्त व्यक्तिसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन ।’ एमिलीको ताज खोसिएपछि प्रतियोगिताको फस्ट रनरअप मिस एनी ग्रेस मुताम्बु अर्काे मिस जिम्बाब्वे बनेकी छिन् । उनी नै चीनमा हुने मिस वल्र्डमा प्रतिनिधत्व गर्न जाने छिन् । मिस वल्ड प्रतियोगिता आगामी डिसेम्बर १९ मा आयोजना गरिँदैछ ।
- See more at: http://www.ratopati.com/2015/06/14/240538.html#sthash.suhzRmbl.dpuf
सिरियामा बेचिएकी नेपाली चेली रेश्मीलाई उद्धार गर्न अभिनेत्री रेखाको अपिल
धनकुटामा प्रदेश राजधानी माग गर्दै आमहड्ताल